Samsung Gear S3 ကိုမိတ်ဆက်ပြသခြင်းမပြုမီ | Gadget သတင်း
Samsung Gear S3 ကိုမိတ်ဆက်ပြသလိုက်တာမတိုင်မီကတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်
ဒီနေ့ Samsung က Gear S3 အသစ်ကိုထုတ်တော့မယ်အမှန်တရားကိုပြောရလျှင်နည်းပညာဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်သည်စက်တင်ဘာ ၂ ရက်အထိတရားဝင်စတင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဘာလင်ရှိ IFA ၏မူဘောင်အတွင်း၌သင်၏စမတ်နာရီသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏စမတ်နာရီ၏ဤပုံစံအသစ်၏ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့သော်လည်း ethe လွန်ခဲ့သောနာရီများက၎င်းကိုစစ်ထုတ်ထားသောရုပ်ပုံများတွင်တွေ့ရသည်.
ဆောင်းပါးတလျှောက်လုံးဖြန့်ဝေထားသောသင်မြင်နိုင်သောပုံရိပ်များတွင် Gear S3 ကိုတွေ့ရပြီး၎င်းမှစတင်သောလိုင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိမ့်မည် ဂီယာ S2၎င်းကို ပို၍ ပင်ကြော့ရှင်းသောထိတွေ့မှုပေးသော်လည်း။ စက်အသစ်များသည်ရိုးရာနာရီများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်မှာ၎င်းသည်စမတ်နာရီဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားသိစေမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်အနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်လိုသောကြောင့်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင် S ကamsung သည်ဤပုံရိပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကိုမှအတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခြင်းမရှိသေးပါသူတို့ကို SamMobile ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပေမယ့်လည်း Samsung ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလိုမျိုးဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်အလွန်နီးစပ်သို့မဟုတ်ကိုက်ညီသောသတင်းများသာထွက်ပေါ်လာသည်။ Gerar S3 ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ Illumished ကုမ္ပဏီ၏ကျေးဇူးကြောင့်ပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Samsung Gear S3 အသစ်ကိုတရားဝင်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ရုပ်ပုံများမှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့အချိန်နီးပါးစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုခြင်းနှင့်၎င်းတို့သည်ပုံတည်းဖြတ်ရေးပရိုဂရမ်များနှင့်အဆင်ပြေခြင်းရှိမရှိဆိုတာပါပဲ။
ဒီမွန်းလွဲပိုင်းမှာ Samsung Gear S3 အသစ်အကြောင်း IFA ရဲ့မူဘောင်အတွင်းမှာတင်ပြတဲ့အခါအချက်အလက်အားလုံးကိုသိနိုင်မယ်ဆိုတာသတိရပါ။
Samsung က Gear S3 အသစ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကြောင့်ငါတို့ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်မယ်ထင်သလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » စမတ်နာရီ » Samsung Gear S3 ကိုမိတ်ဆက်ပြသလိုက်တာမတိုင်မီကတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်
၎င်းသည် iPhone7၏စျေးနှုန်းများဖြစ်နိုင်သည်
Fitbit Charge2နှင့် Fitbit Flex 2၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်အရာနှစ်ခုဖြစ်သည်